'कसैले ब्याटम्यान-सुपरम्यान कल्पना गर्ला, मेरो दिमागमा केटी पात्र नै आयो' :: Setopati
'कसैले ब्याटम्यान-सुपरम्यान कल्पना गर्ला, मेरो दिमागमा केटी पात्र नै आयो'
२०७२ सालमा एउटा सिनेमा रिलिज भयो- रेशम फिलिलि। सो सिनेमामा रहेको मुढेबलको धनी र खानाप्रेमी एउटा पात्र हिट भयो। पात्रको नाम थियो-‘च्यारका’। पात्र हिट भए पनि धेरैलाई उनको वास्तविक नाम थाहा नभएको हुन सक्छ। उनको नाम हो आशुतोष राज श्रेष्ठ।
४ वर्षको अवधिमा अर्को सिनेमामा उनलाई देखिएन। तर अब उनी पुनः सिनेमामा देखिने भएका छन् तर फरक भूमिकामा। यसपटक उनको भूमिका पर्दा अगाडि भन्दा पनि पछाडि रहेको छ।
उनी भदौ ६ गते रिलिज हुने नम्रता श्रेष्ठ स्टारर 'जाइरा'का निर्देशक हुन्। उनी आफ्नो डेब्यू सिनेमालाई लिएर उत्साहित छ।
भन्छन्- सिनेमा 'ट्राइड एण्ड टेस्टेड' बदलाको कथा बोकेको सिनेमा हो तर मैले आफ्नो हिसाबले पेस गरेको छु।
एक्सन सिनेमा मनपराउने दर्शकलाई सिनेमा मनपर्छ। उनको यो दाबी सही निस्कियोस्। उनले आफ्नो डेब्यू सिनेमाको कुरा गर्दा सेतोपाटीका लागि अशेष अधिकारीसँग गरेको कुराकानीमा उनी यस्तो सुनिएका छन्ः
नयाँ निर्देशक हुनुहुन्छ, अलिकति तपाईंको सिनेमाको पृष्ठभूमि बताइदिनुस् न।
'रेशम फिलिलि' सिनेमाबाट अभिनेताको रूपमा करियर सुरू गरेको हो। प्रणव जोशीकोमा सहायक निर्देशक बन्न गएको थिएँ। अभिनयको प्रस्ताव गर्नुभयो। अडिसन दिएँ, छानिएं। त्यहीबाट सिनेमा यात्रा सुरू भयो।
अभिनय छोडेर निर्देशनमा ढल्किनुको कारण?
'रेशम फिलिलि'को बेलामा पनि मेकिङ सिक्ने चाहनाले पुगेको थिए। कलाकार बन्न पुगेँ। सिनेमा बनाउने रहर मरेको थिएन। त्यो सिनेमापछि झन सिनेमा बनाउने रहर जाग्‍यो।
रहरलाई निर्देशनसम्म कसरी पुर्‍याउनु भयो?
सिनेमा बारेमा किताबहरू खोजेर आफै पढ्न थाले। सेल्फ टट जर्नी हो। पछि फिल्म बनाउने की भन्ने भयो, दुई चार जनासँग कुरा पनि भयो 'चिया' र 'कुचिण्डो' नामका दुईटा सट सिनेमा गरे। कुचिण्डो भन्ने थियो मार्शल आर्टसम्बन्धी सिनेमा थियो ।
म युकेबाट एमबिए गरेर नेपाल फर्किएं। यता फर्केर ब्याकंहरूमा इन्टर्नसिपहरू गरें तर तिनमा मन गएन। रूचि त पहिलादेखि थियो, बच्चाबाट नै यसमै थियो। सिनेमा पढ्न नदिएकाले मात्र एमबिए गरेको हुँ।
'जाइरा' बनाउने सोच कसरी आयो?
मलाई सक्रिप्ट लेख्न आउँदैनथ्यो अनि म कथा मात्र लेख्थे। किताब पढ्ने बानी थियो, अनि किताबमा कथा जसरी लेखिन्छ, त्यसरी नै लेख्थे। पछि त्यसरी हुँदैन भनेर स्क्रिप्ट राइटिङ पढ्न थाले आफै। स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन आदि जानेपछि ल! आफै लेख्छु भनेर सुरू गरें। म एकदमै एक्सन सिनेमा प्रेमी। मलाई जेम्स बोण्ड, चार्लिज एन्जलस किसिमका सिनेमा मनपर्ने। 'जाइरा'चाँहि मैले मेरो सुपरहिरो-सुपर हिरोइन हो भनेर मनमा राखेर लेखेको कथा हो।
वान लाइन कसरी बनाउनुभयो?
म धेरै किताबहरू पढ्थेँ। पढेका किताबहरूबाट प्रभावित बनेर लेखेको हुँ। त्यो 'अमेरिकन स्नाइपर' भन्ने किताब पढेको थिएँ। त्यसमा एउटा अमेरिकन आर्मीको बायोग्राफी छ, त्यसमा चाँहि ऊ इराकमा खटिएको हुन्छ। किताब गोली हान्ने बेलामा उसको मनमा आउने सोचहरू राम्रोसँग लेखिएको छ। त्यस्तै अपराध सम्बन्धी 'डोङ्ग्री टु दुबाई' जस्ता किताबहरूले पनि मलाई पात्रहरू जन्माउम सहयोग गरे। त्यसमाथि मलाई मेरो सिनेमालाई इउटा बलियो नाम दिन मन थियो।
लेडी प्रोटागोनिस्ट किन?
दिमागमा फिमेल लिड किन आयो थाहा छैन। कसैले ब्याटम्यान कल्पना गर्ला, कसैले सुपरम्यानको कल्पना गर्ला त कसैले वन्डर वुमन कल्पना गर्ला। मलाई सोच्दै जाँदा दिमागमा केटी पात्र नै आयो, त्यसैले। केटीबाट कथा राम्रोसँग भन्न सक्छु लागेर हो।
मेकिङका हिसाबले यो कति गाह्रो सजिलो सिनेमा थियो?
गाह्रो नै थियो। पहिलो त यसको एक्सन भयो। यसमा विभिन्न शैलीको एक्सन दिएका छौं। यसको मतलब साउथ सिनेमामा हेरेजस्तो एक्सन त यसमा छैन। केही रिङभित्र खेलिने वास्तविक फाइट जस्तो छ एक्सन छ । त्यसैगरी एउटा साढे एक मिनेटको एक्सन सिन छ जसलाई हामीले वानकटमा तयार गरेका छौ, बिना कुनै सम्पादन। सकेसम्म प्रस्तुतिमा नयाँपन दिने प्रयास मैले गरेको छु।
अनि पात्रहरूका लागि उपयूक्त कलाकार छान्न कति समय लाग्‍यो?
डेब्यू भएर हो या नेपालमा भएर हो मलाई छान्न त गार्हो नै पर्‍यो। मेरो पहिलो सिनेमा भएर होला सुरूमा कतिले पत्याउनुभएन। विश्वास जित्न पनि गाह्रो भयो। पहिले के गर्नुभएको छ?, जस्ता प्रश्न हरू उठे। कतिबेला कलाकारले मलाई रिजेक्ट गर्नुभयो, कतिबेला मैले कलाकारलाई रिजेक्ट गरें। त्यसैगरी छानेकामा पनि कतिको डायलग भए, एक्सनमा नहुने, एक्सन, भए डायलग अभिनय नहुने भए। त्यसैले पूरा लाइनअप तयार गर्न झण्डै २- साढे २ महिना लाग्‍यो।
सिनेमा बनिसकेको छ, बनेको सिनेमाबाट आफू कुन हदसम्म सन्तुष्ट हो?
७५-८० % सन्तुष्ट छु।
दर्शकका रूपमा आफूले यो सिनेमा अरूलाई हेर भन्ने अवस्थामा हो की होइन?
म एक्सन जनराको फ्यान हो, लभस्टोरी हेर्न सक्दिनँ। त्यसैले यदि कोही एक्सन जनराको फ्यान हो भने उसलाई ढुक्कसाथ हेर भन्न सक्छु। हलिउड बलिउडसँग नदाजूँ । नेपाली सिनेमाको हिसाबले एउटा स्तरमा बनेको छ।
पछिल्लो समय नेपालीमा नयाँ हो भन्दै अन्त कतै पहिले बनेका या आइसकेका सिनेमा आउने गरेको छ, यस्तोमा 'जाइरा' कहाँ छ?
म यसमा फरक छु भन्दिनँ, ट्राइड एण्ड टेस्टेड बदलाको कथा यसमा छ। म दर्शकलाई झुक्काउन चाहन्नँ। प्रस्तुतिका हिसाबले कुनैसँग मिल्दैन मैले आफ्नो फरक शैली दिएको छु। त्यसको ग्यारेन्टी म दिन्छु।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ३, २०७६, ०१:०३:००